Usodolobha ugqugquzela abafelokazi | News24
Usodolobha ugqugquzela abafelokazi
USODOLOBHA wakwaMaphumulo uNkk Happy Ngcobo uhlangane nabafelokazi bendawo ngoLwesihlanu eledlule ehholo lo mphakathi ngenhloso yokubagqugquzela ukuba babe ngosomabhizinisi.
Lo mcimbi ubuhanjelwe umphathi wakwamasipala uMnuz H.N. Maphumulo, usomlomo womkhandlu wakwaMaphumulo ikhansela V. Mbatha, ikhansela D.B. Luthuli, kanye nobevela kuMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu uNkk Thandiwe Zwane.
UNkk Ngcobo uthe abafelokazi babhekene nomsebenzi wokunakekela imndeni yabo, umsebenzi ongelula uma umzali engenaye umuntu abambisene naye, yingakho lo mcimbi ubuhlose ukuba uthuthukise futhi ugqugquzele abafelokazi ukuze bezokwazi ukulwisana nobuphofu ngokuthi beziqalele imsebenzi.
Omama bafundiswe ngamathuba okuqala amabhizinisi ahlukahlukene njengokukhiqiza iphepha lendlu yangasese, amanabukeni ezingane kanye nokuqala izingadi zemfino.
UNkk Ngcobo unxuse omama ukuba bexhumane nomasipala kanye nemnyango kahulumeni eyahlukahlukene uma bedinga usizo.
Uqhube ngoku banxusa ukuba bebe yingxenye yama war-rooms ukuze bezokwazi ukuthola usizo olufanele.
Abafelokazi bathole ithuba lokuthi bekhulume ngezinkinga abahlangabezana nazo kanti futhi bakhombise ukuba nalo ugqozi lokuqala izingadi zemfino.